विजनेश – Page6– सप्तरंगी एफ एम
Home / विजनेश (page 6)
मेचि सहकारीद्वारा जेष्ठ सदस्य सम्मान र भ्रमण
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/असोज २६, २०७५ दमकमा रहेको मेची सहकारी संस्थाले सहकारीका ६५ बर्ष माथिका जेष्ठ शेयर सदस्यहरुलाई सम्मान गरेको छ । शुक्रबार दमक ६ स्थित सहकारिकै सभाहलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि सम्मान गरिएको ब्यवस्थपक खोम प्रसाद बगालेले जानकारी दिनुभयो । कर्यक्रममा सहकारीका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भट्टराई र उपाध्यक्ष गीता कुँवरले खादा ओढाएर साथै मायाको चिनो स्वरूप लौरो र दशैँ खर्च ...
सप्तरङ्गी एफ.एम.को १२औं साधारणसभा सम्पन्न
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/असोज १९/ सप्तरङ्गी एफ.एम.ले आज आफ्नो १२ औं साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । झापाको दमक ६ स्थित मेचिसहकारी संस्थाको भवनमा सञ्चालीत एफ.एम.ले आज एक औपचारिक कार्यक्रमका विच आफ्नो साधारणसभा सम्पन्न गरेको हो । साधारणसभाले अध्यक्ष मेहेरमान लिङदेनले प्रस्तुत गर्नु भएको अध्यक्षको प्रतिवेदन सुझाव सहित पास गरेको छ । अध्यक्ष मेहेरमा लिङदेनको अध्यक्षतामा भएको साधारणसभामा सञ्चालक रेगिना भट्टराई प्रसाईंले ...
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/१७ अशोज २०७५/डिकेश लामा आफ्नो नामको जग्गा अर्कोले विक्री गरेको भन्दै झापाको दमककी एक बृद्दाले आज न्यायको माग गर्नु भएको छ । आफ्नै नामको जग्गा आफैले वेचेको कागज देख्दा मैंले कसरी जग्गा वेचे भन्ने कुरामा दमक वडा नं. ४ की ६९ बर्षीय टेकमाया मावोहाङ छक्क पर्नु भएको छ । आफू भारतको आसाममा छोराको घरमा गएको समयमा अर्कै मान्छेले ...
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/असोज १५/ दमक–६ स्थित उद्यम विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आज १० औं बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । स्थानीय रेडक्रस सभाहलमा एक कार्यक्रम गरि सहकारीले आफनो साधारणसभा सम्पन्न गरेको हो । सभाामा संस्थाकी अध्यक्ष चन्द्रकुमारी खड्का भट्टराईले सञ्चालक समितिको र लेखा संयोजक निर्मल गुरुङले लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । दुवै प्रतिवेदन संस्थाको वन्दसत्रले सुझावसहित ...